Ngaba ujonge indawo oyithandayo?
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguUlrike
Ngena kwaye uzive ulungile. Indawo yokuhlala yale mihla kunye nenempahla ekhululekileyo enomnyango owahlukileyo, amagumbi amabini okulala ahlukeneyo aneebhedi ezinkulu ezimbini, ibhedi yesofa eyi-140x200 kwigalari, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo elinendawo yokuhlala edityanisiweyo kunye namagumbi okuhlambela ayi-2, enye ineshawa kunye nendlu yangasese enye enendlu yangasese. bidet, yokuchamela kwakunye yokuvasa inayo yonke into oyidingayo ukuze ukhululeke uze uyitshaje kwakhona ibhetri yakho emva kosuku emsebenzini okanye iholide kunye abahambahambayo. Imigangatho emi-2 yeyayo
Uhlala phakathi kwendalo entle, indawo efanelekileyo yokuqalisa imisebenzi emininzi ejikeleze i-Osnabrück, ukuphumla kunye nokuphumla kubandakanyiwe. Indawo yokuhlala eyahlukileyo yeyala maxesha kwaye inefenitshala ekhululekileyo.Ixhotyiswe nge-WiFi kunye ne-TV, ikhitshi elinendawo yokuhlala kunye nendawo yokuphumla, uziva usekhaya ngokukhawuleza. Umgangatho uqukethe iinkuni zangempela okanye iithayile kuwo onke amagumbi. Unokuphumla kwi-terrace yakho eyahlukileyo kwaye, ngethamsanqa elincinci, jonga izilwanyana zasendle eziza kutyelela igadi. Le ndawo yindawo ekungatshaywayo kuyo kwaye ngelishwa izilwanyana zasekhaya azivumelekanga.
Iziko le-Osnabrück li-9 km ngemoto. Ukubona indawo okanye ukuthenga: ezinye iingcebiso zazo zombini:
I-cathedral yase-St.Peter yaqala ukwakhiwa emva kokusekwa kwe-diocese ngu-Charlemagne ngo-785 kwaye iseyi-cathedral ye-diocese yase-Osnabrück ukuza kuthi ga ngoku.
Iholo yedolophu edumileyo, eyakhiwa phakathi kowe-1487 nowe-1512 ngendlela yesiGothic yasekupheleni, yayiyindawo yoxolo lwaseWestphalia ngowe-1648.
IGadi yeBhotani yeYunivesithi
Indlu kaFelix Nussbaum: Imyuziyam yobugcisa kunye nemyuziyam malunga namagcisa abulewe kwiWWII
I-Piesberg (ifosili kunye nemidlalo yendalo): umkhondo omkhulu wokunyuka intaba enamaqonga aliqela kunye neembono ezifanele ukubonwa.
Ukuthenga: indlu yezemidlalo kunye nefashoni L&T
Indlu yefashoni egxininiswe entliziyweni ye-Osnabrück yenye yezona zindlu zintle kwaye zaziwa kakhulu kwi-Northern Germany. Uluhlu alupheli ngefashoni kodwa ngeHasewelle, indawo yokusefa yenye yezona venkile zintsha zemidlalo eYurophu.
Imalunga neekhilomitha ezili-12 ukuya kwiMyuziyam yaseKalkriese kunye nePaki, imyuziyam ye-archiological kunye nemyuziyam evulekileyo eqhotyoshelweyo.
I-Nettetal eyi-1.5 km njengoko i-crow ibhabha yindawo ethandwayo yokuhamba, ukubaleka kunye nokuhamba. Indawo yokusila yamanzi, eyenye yezona zindala kwindawo yase-Osnabrück, kunye nebala legalufa elincinci kunye namava adumileyo kunye ne-excursion restaurant igqibezela inkqubo yokuzonwabisa.
Hallo, ich bin Ulrike. Ich freue mich immer jemandem unseren Lieblingsplatz zu zeigen und Euch kennenzulernen
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Belm